Xukuumadda Burundi oo sheegtay in tiro ciidamadeeda ah lagu dilay weerar gaadmo ah | Baydhabo Online
Xukuumadda Burundi oo sheegtay in tiro ciidamadeeda ah lagu dilay weerar gaadmo ah
Ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ee qaybta ka ah Halwgalka AMISOM ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ayAl-shabaab ku qaaday Jimcihii shalay, iyagoo marayay dulleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, sida laga soo xigtay saraakiil amni iyo xubno ka tirsan AMISOM.
Weerarkan ayaa waxaa sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen ciidammo ka tirsan AMISOM, waxaana sidoo kale lagu dilay darwallo waday gaadiid u kireysnaa AMISOM oo Soomaali ah.
Ciidamadan la dilay iyo kuwa la dhaawacay ayaa waxay wadeen sahay ay u sideen ciidammo ka tirsan AMISOM oo ku sugnaa waqooyiga degmada Jowhar oo ah xarunta gobolka Shabeellada Dhexe.
Inkastoo Al-shabaab ay sheegtay inay ku dileen weerarkaan labaatameeyo ka tirsan ciidamada AMISOM, ayaa haddana saraakiil amni oo xukuumadda Somalia ka tirsan waxay sheegeen in dhimashada askarta AMISOM ay tahay shan askari oo u dhashay dalka Burundi.
Sidoo kale, Madaxweyne ku xigeenka dalka Burundi, Gaston Sindimwo oo la hadlay isaguna idaacadda VOA-da ayaa sheegay in tiro askarta Burundi ee qaybta ka ah AMISOM lagu dilay weerarkaas gaadmada ah.
Dhanka kale, goobjoogayaal shacab ah oo ku nool agagaarka deegaanka Qalimoow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid ah halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay inay arkeen xoogag ka tirsan Al-shabaab oo jiidaya askar ka tirsan AMISOM oo mayd ah.
Mas’uuliyiin ka tirsan hay’adaha amniga Dowladda Somalia ayaa iyaguna u sheegay warbaahinta qaarkeed in xoogagga Al-shabaab ee weeraray ciidanka AMISOM ay ahaayeen kuwo si aad ah u hubeysan.
Ugu dambeyn, Taliska AMSOM ayaan weli ka hadlin weerarkaan iyo sidoo kale khasaaraha kasoo gaaray, balse xaaladda degmada Balcad oo ay la wareegtay kooxdu shalay ayay dib uga baxeen, waxaana daggan xaalada degmada Balcad oo qiyaastii 30-km dhanka waqooyi kaga beegan xarunta Soomaaliya ee Muqdisho.